Warshad Kiristaalo Laser - Shiinaha Soosaarayaasha Kiristaalo Laser, Alaab-qeybiyeyaal
Waxaan ku siin karnaa crystals laser tayo sare leh oo kala duwan, oo leh uruurinno kala duwan, ion doping oo kala duwan; faahfaahinta sida ku xusan codsiyada, oo ay ku jiraan Neodymium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Nd: YAG) ； Erbium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Er: YAG) Muraayadda) iwm., Waxay ku kala duwan yihiin xulashooyinka iyo xalalka ay bixiso DIEN TECH.
Nd, Cr: YAG Kiristaalo
YAG (yttrium aluminium garnet) leysarka waxaa lagu muquunin karaa chromium iyo neodymium si kor loogu qaado astaamaha nuugista laser-ka. Laydhka NdCrYAG waa leysar dawladeed oo adag. Chromium ion (Cr3 +) wuxuu leeyahay koox ballaaran oo nuugista ah; waxay nuugtaa tamarta waxayna u wareejisaa ion neummium ion (Nd3 +) iyadoo loo marayo isdhexgalka dipole-dipole. Mawjada dhererkeedu yahay 1.064 µm waxaa ku baxaya laser-ka.
Nd: Kiristaalo YAG
Nd: YAG ul crystal waxaa loo isticmaalaa mashiinka calaamadeynta Laser iyo qalabka kale ee laser.
Waa walxaha kaliya ee adag ee sida joogtada ah ugu shaqeyn kara heerkulka qolka, waana kan ugu fiican uguna fiicnaanta waxqabadka laser.
Er: YAG Kiristaalo
Er: YAG waa nooc aad u fiican oo ah 2.94 um laser crystal, oo si ballaaran loogu isticmaalo nidaamka caafimaadka laser iyo meelaha kale. Er: laser YAG crystal laser waa sheyga ugu muhiimsan ee laser 3nm, iyo jiirada leh waxtarka sare, waxay ka shaqeyn kartaa leysarka heerkulka qolka, leerarka dhejiska ah wuxuu ku dhexjiraa baaxada kooxda badbaadada indhaha, iwm. 2.94 mm Er: YAG laser has waxaa si weyn loogu adeegsaday qalliinka beerta caafimaadka, quruxda maqaarka, daaweynta ilkaha.
Ho: YAG Kiristaalo
Ho: YAG Ho3+ ion-yada lagu dhejiyay kareemada leysarka ee dahaarka leh waxay soo bandhigeen 14 kanaal isku-dhafan oo leysar ah, oo ku shaqeynaya qaabab ku meel gaar ah laga soo bilaabo CW illaa habka xiran. Ho: YAG waxaa badanaa loo adeegsadaa hab wax ku ool ah oo looga soo saaro laser-ka 2.1-μm laser 5I7- 5I8 kala guurka, loogu talagalay codsiyada sida laser-ka ee durugsan, qalliinka caafimaadka, iyo bamgareynta Mid-IR OPO si loo gaaro qiiqa 3-5micron. Nidaamyada tooska loo shubay ee diode, iyo Tm: Nidaamka lasaaray Fiber Laser waxay muujiyeen waxtarka dhaadheer ee hiigsiga, qaarkood waxay kudhawaadeen xadka aragti ahaaneed.
Ce: YAG Kiristaalo
Ce: YAG crystal waa nooc muhiim ah oo kristantariyaal scintillation ah. Marka loo barbardhigo istiraatiijiyeyaasha kale ee aan dabiici ahayn, Ce: YAG crystal wuxuu hayaa waxtarka iftiinka sare iyo garaaca wadnaha oo ballaaran. Gaar ahaan, heerka ugu sarreeya ee soosaaristeeda waa 550nm, oo sifiican ula jaan qaadaya xasaasiyadda lagu ogaanayo dhererka dhererka ogaanshaha qalabka loo yaqaan 'silicon photodiode detection'. Sidaa awgeed, waxay aad ugu habboon tahay qalabka wax lagu baaro ee loo yaqaan 'photodiode' oo ah qalabka wax lagu baaro iyo qalabka wax lagu baaro si loo ogaado walxaha iftiinka ku shaqeeya. Waqtigaan, waxtarka isku xidhka sare ayaa lagu gaari karaa. Intaas waxaa sii dheer, Ce: YAG sidoo kale waxaa caadi ahaan loo isticmaali karaa fosfooraska tubbada raabka ee cathode iyo diodoyinka iftiinka iftiinka u soo baxa.
CTH: YAG Kiristaalo
Ho, Cr, Tm: YAG -yttrium aluminium garnet laser kiristaalo lagu dhejiyay chromium, thulium iyo holmium ions si ay u bixiyaan lasing at 2.13 microns waxay helayaan codsiyo aad iyo aad u badan, gaar ahaan warshadaha caafimaadka. shaqaaleeya YAG martida loo yahay. Dhismooyinka 'YAG' ee jirka, kuleylka iyo indhaha ayaa si wanaagsan loo yaqaan loona fahmaa naqshadeeye kasta oo laser ah Waxay leedahay codsiyo ballaaran oo ku saabsan qalliinka, ilkaha, baaritaanka cimilada, iwm.